Phili Mjoli | January 13, 2021
ONGOTI bezempilo bathi asikho isizathu sokuthi kube nguhulumeni kuphela onegunya lokuthenga umgomo weCovid-19.
USolwazi uSchabir Madhi waseWits University, ohola ithimba elenza ucwaningo ngomgomo i-Oxford Astrazaneca kuleli, uthi akaziqondi izizathu zokuthi kungani igunya lokuthenga umgomo kungelikahulumeni kuphela.
Uthe akwaziyo ukuthi lesi sinqumo sizokwenza ukuthi lo mgomo ungatholakali kalula ngesikhathi kusaqalwa ukugoma ngoba uhulumeni kuphela ozobe ewusabalalisa.
Usho kanjena nje izinhlangano zomphakathi zifake enkantolo uMnyango wezeMpilo kuleli ngalesi sinqumo.
"Ukubambisana kubalulekile ukuze umgomo usheshe ufinyelele kubantu futhi kusiza nangokuthi izinsiza ezikhona ophikweni oluzimele nolukahumeni kuyabanjiswana ngazo. Okwamanje uhulumeni akakalidaluli isu analo lokuthi lo mgomo uzosatshalaliswa kanjani," kusho uSol Madhi.
Uthe umgomo ozofika kuqala uhulumeni uzoba nayo indawo yokuwugcina kodwa uma sekufike eminye ethengiwe akazi ukuthi ikhona yini indawo eyenele ebandayo engakwazi ukuwugcina.
"Enye into abantu abazibuza yona ukuthi kazi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi umgomo ufinyelele kubantu uma usufikile kuleli ngoba uhulumeni kuyenzeka imithi ayibhadlise endaweni yokugcina izimpahla ekubeni iziguli ezikhungweni zezempilo zibuyela emakhaya zingayiphethe imithi yazo, kuthiwa ayikho kanti iduve kulezi zindawo ezigcina izimpahla," kusho yena.
Uthe ngokwakhe akubalulekile kakhulu ukuthi ubani othenge umgomo, okubalulekile ukuthi ufinyelele kubantu ngesikhathi ungahlali emashalofini uze uphelelwe yisikhathi.
Uthe lokhu kuqagela kuzoqedwa ukuthi uhulumeni adalule uhlelo lwakhe.